Proclaiming the Word - Fanasana avy amin’ny Apostoly Paoly | Outlines of Messages
3. Toeram-pivarotana ( Efesiana 5, 15-17)
Nitondra antsika eo amin’ny sehatry ny varotra indray ny Apostoly Paoly ka mampahery antsika mba ho toy ny mpanao afera izay mahay manararaotra ny zavatra tsara.
Raha mandeha amin’ny fahendrena isika, dia tsy mandany fotoana.
4. Efitrano malalaka (Efesiana 5, 18-21)
Manaraka ny Apostoly Paoly ao amin’ny efitrano malalaka isika (EFes 5, 18-19) izay toerana hianarantsika mandeha araka ny Fanahy (Gal 5, 16-26).
Rehefa mandeha araka ny Fanahy isika dia feno fifaliana, fisaorana, ary mifanaiky amin’ireo rahalahy.
5. Tokantrano( Efes 5, 22-33)
Ny famangiana farany izay hitondran’ny Apostoly paoly antsika dia ny ao an-tokantrano, izay ampiasainy ny fanambadiana tahaka ny fifandraisan’I Kristy sy ny Fiangonana. Tia antsika Kristy ary maty ho antsika, ary amin’izao fotoana izao dia tia antsika sy mikarakara antsika Izy. Ito fifandriasna akaiky ito dia hitantsika ao amin’ny Tononkiran’I Solomona ary marina ho an’izay tena miankina tanteraka Aminy izany.
Rehefa manaiky ny tompo Jesosy isika dia lasa fitahiana ho an’ny hafa.